သူရ ဦးရွှေမန်းနဲ့ လွှတ်တော်ထဲက မြေယာပြဿနာ – Ye Htut's Blog
Posted byye htut August 8, 2020 August 8, 2020 Posted inGovernment, MediaTags:yehtutarticle
ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းရဲ့ အွန်လိုင်း သတင်း ရှင်း လင်းပွဲမှာ ဧရာဝတီတိုင်းမြေသိမ်းဆည်းရေးကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးရွှေမန်းက ခိုင်ခိုင် မာမာ ဖြေကြားသွားတာ ကြည့်လိုက်ရတော့ လွှတ်တော်အတွင်းက ကိစ္စတစ်ခုကို သတိရမိတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတာဝန်ယူချိန်ကာလမှာ လယ်ယာမြေနဲ့အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံ ထားရမှုက အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ လွှတ်တော်ကလည်း ဦးတင်ထွတ် ခေါင်းဆောင်တဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ထားတယ်။ အဲဒီကော်မရှင်က တိုင်စာတွေကို ကြား နာ စစ်ဆေးပြီး အစိုးရအဖွဲ့ကို ပို့တယ်။ အစိုးရအဖွဲ့မှာလည်း ဒုတိယသမ္မတ(၂) ခေါင်းဆောင်တဲ့ မြေ အသုံးချရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဗဟိုကော်မတီက လွှတ်တော်က လာတဲ့ တိုင်စာတွေနဲ့ သမ္မတရုံးကို တိုင်တဲ့တိုင်စာတွေ ကိစ္စကို ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ညှိပြီးဖြေရှင်းရတယ်။ ဖြေရှင်းပြီးစီးမှုအခြေအနေ ကို သမ္မတက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အစီရင်ခံရတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ သမ္မတ ရဲ့ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းပြီးစီးမှုအခြေအနေသဝဏ်လွှာကို ဆွေးနွေး တယ်။ အဲဒါကလည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း နှစ်လတစ်ကြိမ် အစီရင်ခံ တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လယ်ဆည် ဒုဝန်ကြီးက အကျဉ်းချုပ် ရှင်းပြတယ်။ ပြည်ထောင် စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက မှတ်တမ်းတင်တယ်ဆိုပြီး တုံးထုတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အင်န် အယ်လ်ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ထပြီး အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ မပြည့်စုံ ဘူးဆိုပြီးကန့်ကွက်တယ်။ အဲဒီနေ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ သမ္မတ သဝဏ်လွှာနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ စာရင်းဇယား စုစုပေါင်း စာမျက်နှာကိုးမျက်နှာစီပဲ ပါတဲ့အတွက် မပြည့်စုံဘူးလို့ ကန့်ကွက်တာပါ။
ဒေါ်စန္ဒာမင်းပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကရော၊ အင်န်အယ်လ်ဒီကရော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက အပြိုင်အဆိုင် ထပြီး အစိုးရ အဖွဲ့ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်မပြည့်စုံ ဘူးဆိုပြီး ဝေဖန်ကြတယ်။ မှတ်မိသလောက် အဲဒီအချိန်ကဆွေးနွေးသူတွေ ထဲမှာ အခု နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုတို့ပါသ လို ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဘက်က ဦးတင်ထွတ်၊ ဦးခင်ရွှေ၊ ဦးတင်မောင်ဦး ( အခု UBP) တို့ယ်ပါတယ်ထင်တယ်
နောက်ဆုံး မိုက်တောင်းတဲ့လူများလွန်းတော့ ဦးရွှေမန်းက ခွင့်မပြုဘဲ ဆွေးနွေးမှုကို ရပ်ပစ်လိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
ပြဿနာက အဲဒီမှာတင်မပြီးဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာလည်း အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လွှတ်တော်ကြားမှာ ပွတ် တိုက်မှုတွေက ရှိနေတော့ အစိုးရအဖွဲ့က လွှတ်တော်ကို ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ စွတ်စွဲချက်တွေ ပေါ် လာတယ်။ ဦးတင်ထွတ်ကဆိုရင် အစီရင်ခံစာမပြည့်စုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဆိုတင်မယ်ဆိုပြီးတောင် ပြောခဲ့တယ်။ မီဒီယာတွေကလည်းရေးတယ်။
မီဒီယာတွေဘက်က အဲဒီကိစ္စကို သာမန်သတင်းမဟုတ်ဘဲ ရေဆုံးရေဖျားစုံစမ်းရေးဖို့ကြိုးစား က (ကို) စည်သူအောင်မြင့်ပါ။ သူက ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့က ဘာ့ကြောင့် အစီရင် ခံစာအပြည့်အစုံမတင်တာလဲလို့မေးတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်က အစိုးရအဖွဲ့က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အစီရင်ခံစာက ကိုးမျက်နှာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းများ၊ တပ်မတော်မှ သိမ်းယူမှုများအပြင် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများရဲ့ သိမ်းယူမှုများကို အမည်များနဲ့တကွ အတိအကျ ဖော်ပြထားတဲ့ ဇယားတွေအပါအဝင် စာမျက်နှာ ၂၅၀ ရှိပါတယ်ဆိုပြီး ဇယား (၁) ကဘယ်နှစ်မျက်နှာ ၊ (၂) က ဘယ်နှစ်မျက်နှာစသည်ဖြင့် အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းခဲ့ရတယ်။ ဇယားနမူနာတစ်ချို့လည်း ပို့ပေးခဲ့တယ်။ ဒီလိုပို့ပေးတာဟာလည်း ဒီသဝဏ်လွှာဟာ လုံခြုံရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
(ကို) စည်သူအောင်မြင့်က ၁၂-၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့ထုတ် The Myanmar Post ဂျာနယ်မှာ လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း ဘာတွေ ထိန်ချန်ထားခဲ့သလဲ” ဆိုပြီး ဆောင်းပါးတစ် စောင် ရေးခဲ့တယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ဆောင်းပါးရှင်က
“ လွှတ်တော်ထဲမှာ အမတ်တွေက ဒီအစီရင်ခံစာ မပြည့်စုံဘူးဆိုပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ထပြောနေတဲ့အချိန် နာယက သူရ ဦးရွှေမန်းအနေနဲ့ ဘာကြောင့် ရှင်းမပြလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာပါ။ သူ့အနေနဲ့ အခု ခင်ဗျားတို့ လက်ထဲမှာ ဖြန့်ဝေထားတာဟာ တကယ်ကို အကြမ်းဖျင်းပါ။ အပြည့်အစုံ ကျွန်တော့် လက်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဝေဖန်မှုတွေ မစောကြပါနဲ့ဦးလို့ ဘာကြောင့် မပြောခဲ့သလဲဆိုတာပါ။ ဒီအတွက် နာယက သူရဦးရွှေမန်းရဲ့ ရိုးသားမှုကို သံသယဖြစ်ဖွယ် ရှိပါတယ်။ ဒီအတွက် စဉ်းစားဖို့တစ်ချက်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ဒီအစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံကို ဘာကြောင့် ထိန်ချန်ထား ရသလဲဆိုတာ ပါ။” ဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းတော့ အဲဒီဆောင်းပါးကြောင့်လား၊ နာယကကြီး က ရှင်းပြလိုက်လို့လား မသိဘူး၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း အစိုးရအစီရင်ခံစာမပြည့်စုံဘူးလို့ အပြစ်မတင်တော့ ဘူး။ ဦးတင်ထွတ်လည်း အဆိုမတင်တော့ဘူး။
အဲဒီအချိန်က သမ္မတ သဝဏ်လွှာနဲ့အတူပေးပို့ခဲ့တဲ့ ဇယားတွေထဲက နေပြည်တော်နဲ့ မကွေးတိုင်းက နိုင်ငံတော်ပိုင်စီမံကိန်း တွေ၊ ဧရာဝတီတိုင်းကပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ မြေသိမ်းဆည်းမှုတွေ ဖြေရှင်းပြီးစီးမှု၊ ဖြေရှင်းရန်ကျန်မှုတွေကို တင်ပြထား နမူနာတစ်ချို့ ကို လေ့လာ နိုင်အောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လယ်ယာမြေနဲ့အခြားမြေတွေသိမ်းဆည်းမှုပြဿနာက သမိုင်းကြောင်းကလည်းရှည်၊ ပြဿနာ လည်း အင်မတန်များပါတယ်။ လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်အထိ ပါသလို နိုင်ငံအကျိုးအတွက် တကယ် လိုအပ်လို့သိမ်းတာ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအခြေခံပြီးသိမ်းတာ စသည်ဖြင့် ရှုပ်ထွေးနေတာပဲ။
အစိုးရက ပြန်စွန့်လွှတ်တော့လည်း ဘယ်သူကို ပြန်ပေးမှာလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာရှိပြန်ရော၊ တစ်ချို့ ပိုင်ရှင်ကတစ်ယောက်၊ လက်ငုတ်လုပ်နေတာက တစ်ယောက်၊ တစ်ချို့ သစ်တောမြေ စသည် ဖြင့် ပေါ့။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတာဝန်ယူချိန်မှာ မပြီးပြတ်ခဲ့သလို အခုအစိုးရလက်ထက်မှာလည်း ကြိုးစားဖြေရှင်းနေရတုန်းပဲ။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ မြေသိမ်းကိစ္စနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရ ဦးရွှေမန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဝက မီဒီယာကို ရှင်းခဲ့ရတာလေးသတိရလို့ မ ျှေ၀ တာပါ။
2 thoughts on “သူရ ဦးရွှေမန်းနဲ့ လွှတ်တော်ထဲက မြေယာပြဿနာ”
Dr. Ney Myo says:
All of your articles, essays and blogs make me feel deaply…..
Sorry for misspelling. Deeply